index | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ နိုင်ငံပိုင် ဂြိုလ်တုစနစ် တည်ထောင်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အား ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂) အစည်းအဝေး ခန်းမ တွင် ပြုလုပ်ရာ ၌ မြန်မာ နိုင်ငံပိုင် ဂြိုလ်တုစနစ် တည်ထောင်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား..
၂၃-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ရန် မြေယာ အသုံးပြုမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး တွင် ကော်မတီ ဥက္ကဌ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင် အမှာစကား ပြောကြားစဉ်..
ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း က တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အတူ မန္တလေး ပြည်တွင်း ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆိပ်ကမ်းရုံး သို့ သွားရောက်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ အား ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်..
(၁၈-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ က ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂)၊ နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ပြည်ထဲရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး Ms.Megumi Kaneko အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်..
စတုထ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှူ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား ကို ဇန်န၀ါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂) စုပေါင်းခန်းမ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင် မှ တက်ရောက် စဉ်..
Date: May 05 Place: နေပြည်တော်
ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် e-Government လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ် နှင့် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ..
Date: Apr 27 Place: နေပြည်တော်
ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအား ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းများအား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လိုအပ်သော မူဝါဒ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အား သတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက်..
e-Government လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်
Date: Apr 01 Place: ရန်ကုန်
ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင် သည် ယနေ့ နံနက် (၈) နာရီတွင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ သိမ်ဖြူလမ်း နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့် ရှိ ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှူ ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ သည့် e-Government လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး သို့ တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား..
တံဆိပ်ခေါင်း ဂိုဒေါင် ဆောက်လုပ် ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
နေပြည်တော် စာတိုက်ကြီး ဝန်းအတွင်း တံဆိပ်ခေါင်း ဂိုဒေါင် ဆောက်လုပ်ခြင်း အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Tender Detail Information
Tue, 2017-05-30 16:30
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အိပ်ဖွင့်တင်ဒါ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အိပ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ
Detail for Tender
Mon, 2016-12-26 16:30
စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် တင်ဒါခေါ်ယူ
တင်ဒါ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ